Olee otú Tinye Ndepụta Okwu ka MKV Files na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
MKV bụ a akpa format na pụrụ ịgụnye video, audio, sobtaitel na ozi ndị ọzọ. Ọ bụrụ na gị MKV videos ama nwere sobtaitel track, ị nwere ike mgbe niile na-egosi ya na dakọtara mgbasa ozi ọkpụkpọ KMPlayer ma ọ bụ VLC Media Player. Ma ọ bụrụ na ị na-gị MKV video adịghị abịa na ndepụta okwu faịlụ, i kwesịrị tinye ndepụta okwu gị MKV video mbụ. Na nke a nkuzi, abụọ ụzọ na-ẹkenam-enyere gị aka tinye ndepụta okwu ka MKV nkiri enweghị ihe ọ bụla hassle.
Part 1: Olee ịgbakwunye nkwụnye na ndepụta okwu gị ẹdude MKV fim
Part 2: Dezie ma tinye gị onwe gị ndepụta okwu ka a MKV nkiri
A nkuzi ga-egosi gị otú ị tinye ndepụta okwu ka MKV video na Wondershare Video Converter Ultimate. Site na iji nke a sobtaitel ka video Ntụgharị, i nwere ike tinye ndepụta okwu ka MKV video maka ma merging n'ime a video faịlụ na na na kọmputa, na ngwaọrụ ma YouTube, ma ọ bụ n'ihi na-ere ọkụ na-DVD na-enwe na TV.
Tupu ịmalite igosi gị otú ị ịgbakwunye ndepụta okwu ka MKV video, ịhụ ihe video formats na sobtaitel formats na-akwado, otú i nwere ike inwe ha njikere. Maka nbudata ndepụta okwu, ị nwere ike ịga ebe a maka nkọwa ndị ọzọ.
Ugbu a na-eje ije site na mfe nzọụkwụ ịgbakwunye ndepụta okwu ka MKV video.
Nzọụkwụ 1: Import MKV videos ịgbakwunye ndepụta okwu
Mgbe arụnyere a sobtaitel ka MKV Ntụgharị (Windows 8 na-akwado), na-agba ya na mbubata gị MKV video site na-adọkpụpụta video ka isi windows, ma ọ bụ site na ịpị "Tinye Files" button aka ịchọta MKV video si a popup Chọgharịa window.
Nzọụkwụ 2: Tinye sobtaitel ka MKV video
Mgbe MKV videos ndidi Bubata iji bụ isi windows, nri pịa ya site na ndepụta ma họrọ "Dezie" nhọrọ imeghe video edezi window. Na-aga "Ndepụta Okwu" taabụ na n'elu, na i nwere ike Ibu Ibu mpụga sobtaitel faịlụ (ma na .srt, .ssa, ma ọ bụ .ass faịlụ aha ndọtị) site na ịpị "+" button. Mgbe sobtaitel na n'elu, ị pụrụ ịhụ na ọ ugbua na MKV video na oge ụfọdụ nwere sobtaitel. Site na ndabara, a preset ịke ga-eji. Otú ọ dị, site n'inyocha nhọrọ "T" E wezụga, i nwere ike hazie sobtaitel site font, agba, size, ọnọdụ, nghọta, na na. Mgbe ị na-enwe obi ụtọ na MKV sobtaitel, pịa "OK" button iji gosi ntọala.
Rịba ama: I nwekwara ike ịgbakwunye watermark, tinye mmetụta, na akuku video ke n'elu video edezi window.
Nzọụkwụ 3: Export MKV video ma ọ bụ ọkụ MKV ka DVD na sobtaitel
Ugbu a ọ bụ oge na-arapara sobtaitel ka MKV video-adịgide adịgide. Iji mee otú ahụ, họrọ a chọrọ mmepụta format site na ịpị "mmepụta Format" ndọpụta ndepụta n'akụkụ aka nri. Niile ewu video formats na-akwado, gụnyere MKV, MP4, AVI, MOV. I nwekwara ike ozugbo họrọ a ngwaọrụ ịzọpụta MKV video na sobtaitel na-egwu na ngwaọrụ (eg iPhone, iPod, iPad). Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọkụ MKV ka DVD na sobtaitel, i nwere mbubata faịlụ ke "Ọkụ" interface na begining. Mgbe ihe nile dị njikere, pịa "tọghata" ma ọ bụ "Ọkụ" button na-amalite akakabarede. The ndepụta okwu ga-exported na-adịgide adịgide na-a video ke kpọmkwem usoro.
Bravo! Na Video Ntụgharị (Windows 8 na-akwado), ị nwere ike itinye ndepụta okwu ka MKV video nke na-ekiri na kọmputa, ngwaọrụ ma ọ bụ TV.
Lelee nzọụkwụ site nzọụkwụ video nkuzi n'okpuru:
Nkebi nke 2: Dezie ma tinye gị onwe gị ndepụta okwu ka a MKV nkiri
Ọtụtụ ndị ga-achọ ịmata otú ike ha ndepụta okwu na asụsụ ha chọrọ ma gbaa ya ka MKV videos. N'ezie, ọ bụghị otú ahụ siri ike ma ọ bụrụ na ị nwere ọkachamara ndepụta okwu nchịkọta akụkọ dị ka Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) (Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac)) na n'aka. Nke a na usoro-enye ọgaranya ederede ego n'ihi na ị na họrọ si, na-enye gị ohere n'ihu hazie ya ọnọdụ, font, agba, ịjụ oyi na / agwụ si mmetụta, wdg Download a free ikpe n'okpuru na lelee otú ime nke a nzọụkwụ site nzọụkwụ.
N'okpuru ebe ndu ewe Windows screenshot ịkọwa otú o si arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ a Mac, ị nwekwara ike na-agbaso otu nzọụkwụ. Ma jide n'aka na ị ga-esi nri version maka gị sistemụ.
Nzọụkwụ 1: mbubata gị MKV video
Ẹkedori a usoro, họrọ "16: 9" ma ọ bụ "4: 3" akụkụ ruru, ị ga-abịa a nnọọ kensinammuo isi window, na-egosi dị ka belows. Mbubata gị isi iyi AVI nkiri, nnọọ pịa "Import" na-agagharị na gị faịlụ nchekwa na kọmputa ma ọ bụ ịdọrọ gị AVI videos ozugbo na ya bụ isi window. The kwajuru obere vidiyo ga-egosi dị ka thumbnails na-ekpe ihe tree. Mgbe ị gbakwunye faịlụ niile, ikpuru na dobe ha ka ha na video usoro iheomume otu otu.
Cheta na: The faịlụ na Video usoro iheomume ga-merged ọnụ enweghị ihe ọ bụla na-akwụsị.
Nzọụkwụ 2: Tinye ndepụta okwu ka MKV video na ala
Pịa "Text" taabụ n'elu usoro iheomume, na họrọ a template-amasị gị na-eji gị ndepụta okwu edezi. Ịdọrọ ya n'ebe a na-ị chọrọ. Mgbe ọ na-abịa ebe, a ga-enwe ederede thumbnail "T"-egosi na ahụ Text usoro iheomume. Ugboro abụọ pịa ya ikpughe edezi ebe, mgbe ahụ dochie na gị onwe gị akụkụ, ịgbanwe ya anya dị ka font, agba, setịpụrụ mbugharị na / si mmetụta, na ndị ọzọ. I nwekwara ike ịgbanwe ya faịlụ oge ka mmekọrịta gị na video mgbe ibia ka isi window.
Atụmatụ: Ị nwere ike pịa Play icon ezigbo oge ego mmepụta mmetụta, na kwa ịgbanwe usoro iheomume Zoomer ka ibubaa / si na usoro iheomume ịhụ na ebe ị chọrọ mfe.
Nzọụkwụ 3: Zọpụta ndị gị e kere eke
Na na na otu click pụọ isure ndepụta okwu gị MKV nkiri. Kụrụ "Mepụta" iji nweta mmepụta window, na mgbe ahụ bulie a format ị chọrọ ịzọpụta ya na gị na desktọọpụ. Ọzọkwa, ị pụrụ ọkụ a DVD disk ozugbo gị MKV video na-ekiri ya cozily na gị nnukwu ákwà TV.
Olee otú Download YouTube ndepụta okwu
Top 10 Video joiner ngwa Jikọọ Videos Ọnụ
Get a Ike 64-bit Video Editor
DownloadHelper-adịghị arụ ọrụ? Kpebiworo
Olee otú iji tọghata M4V ka MKV
Olee otú iji tọghata WTV ka MPEG
Top 10 Ndepụta Okwu Editor Ngwaọrụ n'ihi Your Video edezi
> Resource> Video> Olee otú iji Tinye Ndepụta Okwu ka MKV Files na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)